Intern: Trang Nguyen - Galveston County Food Bank
Igama lam ndinguTrang Nguyen kwaye ndingu-UTMB i-dietetic intern ejikeleza kwi-Galveston County Food Bank (GCFB). Ndivalelwe eGCFB iiveki ezine ukusuka ngo-Okthobha ukuya kuNovemba ka-2020, kwaye ngoku ndibuya emva kwexesha elingaphezu konyaka kangangeeveki ezimbini ezingakumbi ngoNovemba 2021. Ndiyawubona ngokupheleleyo umahluko phakathi kweGCFB, kungekuphela nje kwinkangeleko yeofisi kodwa kwakhona. ngobulumko babasebenzi kunye nokuba inkqubo nganye ikhula kangakanani.
Kwiiveki ezine ebendilapha kulo nyaka uphelileyo, ndenze izixhobo zokufundisa ngezondlo eziquka iividiyo, iiresiphi, kunye neencwadana. Ndaye ndafundisa imfundo yezondlo yenyani kunye neyeqela lomntu kubantwana nakubantu abadala kwaye ndasebenza kunye neeProjekthi zeHealthy Pantry Initiative ezixhaswa ngemali yesibonelelo se-SNAP-Ed phantsi kwe-Feeding Texas. Ndaphinda ndanceda i-GCFB ukupakisha iimveliso ukubona ukuba zeziphi izithako abanazo apho, ukuze ndikwazi ukuzisebenzisa ekudaleni iiresiphi. Ndihlala ndizama ukubandakanya abantwana kwimisebenzi yasekhitshini ukuze iresiphi kufuneka ibe lula ngokwaneleyo ukuba abantwana bayenze, kwaye ayinakubandakanya ukusika okuninzi, ukunqunqa, okanye izakhono zemela enzima. Ngeebhokisi zokutya, ndenze iresiphi enezithako ezifikelelekayo nezizinzileyo ukuze abantu babenokuthenga lula, ukuyigcina, kwaye ukuyipheka.
Kulo nyaka uphelileyo ngexesha ndandikwi-GCFB, sasisephantsi kobhubhani we-Covid-19, ngoko ke zonke iiklasi zokufundisa ngezondlo kunye nemisebenzi yashukunyiswa phantse. Rhoqo ngeveki, ndandirekhoda kwaye ndihlele iiklasi ezimbini zevidiyo zemizuzu engama-20 ukwenzela isitiya somntwana kubantwana bebanga lesihlanu. Ndiyayithanda le nkqubo kuba utitshala ovela kuzo zonke izikolo zamabanga aphantsi eGalveston County unokusebenzisa esi sixhobo kwiiklasi zabo ukufundisa abantwana malunga nesondlo. Ezi klasi zondlo zibandakanya izinto ezinxulumene nendima edlalwa ngamalungu kunye nokutya emizimbeni yethu, iivithamini kunye neeminerali ezifunwa yimizimba yethu, njl.
Kulo nyaka, njengoko besanda abantu abafumana amayeza okugonya i-Covid, sinokuya esikolweni kwaye sifundise iiklasi zesondlo kwinkqubo yasemva kokuphuma kwesikolo. Ngokuqinisekileyo ndicinga ukuba iyasebenzisana ngakumbi ngale ndlela kuba abantwana banokubandakanyeka ngakumbi kwimisebenzi kwaye bangahlali nje apho baphulaphule iiklasi ezibonakalayo. Ngaphaya koko, ndaguqulela izinikezelo zemfundo yesondlo kwisiVietnamese. I-GCFB ngoku idala "izixhobo zesondlo kwiilwimi ezininzi" kwiiwebhusayithi zabo ukuze bakhonze abantu abahlukeneyo. Ke ukuba unolwazi ngazo naziphi na ezinye iilwimi kwaye ukulungele ukunceda, unokusebenzisa ulwazi lwakho, ubuchule kunye nobuchule bakho ukuze uncede abantu abaninzi.
egqithileyo ngeposi Previous: Ibhlog yangaphakathi: Nicole
Okulandelayo elilandelayo: Iblogi yeDietetic Intern